The Belmont Report na-arụ ụka na ụkpụrụ nke Ịrịba Ama bụ ọrụ ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịbanye na ya, nakwa na ọ gụnyere akụkụ abụọ: (1) adịghị emerụ ahụ ma (2) mepee uru ndị ga-ekwe omume ma belata nsogbu ọ bụla. The Belmont Report na-emetụta echiche nke "emebila omenala Hippocratic" na ụkpụrụ ahụ ike, a pụkwara igosipụta ya n'ụzọ siri ike ebe ndị na-eme nchọpụta "ekwesịghị imerụ onye ọ bụla n'agbanyeghị uru ndị nwere ike ịbịakwute ndị ọzọ" (Belmont Report 1979) . Otú ọ dị, Belmont Report kwetakwara na ịmụta ihe bara uru nwere ike ịgụnye ikpughe ụfọdụ ndị n'ihe ize ndụ. Ya mere, ọ dị oke mkpa ịghara imerụ ahụ nwere ike imegide ihe dị mkpa iji mụta, na-eduga ndị nchọpụta mgbe ụfọdụ iji mee mkpebi siri ike banyere "mgbe ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịchọta uru ụfọdụ n'agbanyeghị ihe ize ndụ ndị dị na ya, na mgbe a ghaghị ịba uru maka ihe ize ndụ " (Belmont Report 1979) .
Na omume, ụkpụrụ nke Ịba Uru pụtara na ndị na-eme nchọpụta kwesịrị ịmalite usoro abụọ dị iche iche: nchọpụta ihe / ize ndụ ma kpebie ma ihe ize ndụ na uru ọ ga-eme ihe kwesịrị ekwesị. Usoro mbu a bu ihe di mkpa nke choro ihe omuma di iche, ebe nke abuo bu ihe omuma nke ebe ndi ozo nwere ike buru ihe bara uru, ma o bu ihe ojoo.
Achọpụta ihe ize ndụ ma ọ bụ uru bara uru gụnyere ịghọta ma melite ihe ize ndụ na uru nke ọmụmụ. Nnyocha nke ihe ize ndụ kwesịrị ịgụnye ihe abụọ: ihe gbasara nke puru omume na ihe ọjọọ na ihe omume ndị ahụ. Dika nsonaazụ nke ihe ize ndụ / uru, onye nyocha nwere ike imezi ihe omumu nke ime ihe iji belata ohere nke ihe ojoo (dika ihe nchoputa nke ndi na - adighi ike) ma obu belata ihe ojoo ma o buru (dika, mee ndụmọdụ dị maka ndị na-achọ ya). Ọzọkwa, n'oge ndị na-eme nchọpụta ihe ize ndụ / uru, ọ dị mkpa iburu n'uche mmetụta nke ọrụ ha ọ bụghị naanị na ndị na-eme ya, kamakwa na ndị na-abụghị ndị na-anọghị na ndị na-elekọta mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, tụlee nyocha a site na Restivo na van de Rijt (2012) maka mmetụta nke nrite na ndị editọ Wikipedia (atụlere na isi 4). N'ime nchọpụta a, ndị nchọpụta nyere onyinye ole na ole ndị nchịkọta nke ha weere dị ka ndị kwesịrị ekwesị wee debe ha onyinye na Wikipedia ma e jiri ya tụnyere otu ìgwè na-achịkwa ndị ziri ezi ndị editọ nke ndị na-eme nnyocha nyereghị onyinye. Cheedị, ọ bụrụ na, kama ịnye obere nrite, Restivo na van de Rijt kpuchiri Wikipedia na ọtụtụ, ọtụtụ onyinye. Ọ bụ ezie na imepụta a nwere ike ọ gaghị emerụ onye ọ bụla so na ya, ọ nwere ike ịkụghasị ihe niile e kere eke na Wikipedia. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mgbe ị na-eme nchọpụta ihe ize ndụ / uru, ị kwesịrị ị na-eche banyere mmetụta nke ọrụ gị ọ bụghị naanị na ndị na-ekere òkè kamakwa n'ụwa karịa.
Ọzọ, ọ bụrụ na e nwelatala ihe ize ndụ ndị ahụ na uru ndị ka mma, ndị na-eme nchọpụta kwesiri ịchọpụta ma ọmụmụ ahụ ọ ga-adaba. Ndị ọkachamara anaghị akwado mkpokọta ego na uru. Karịsịa, ụfọdụ ihe ize ndụ na-eme ka nchọpụta ahụ ghara ịdị irè n'agbanyeghị agbapụta (dịka akwụkwọ, Akwụkwọ edemede Tuskegee Syphilis kọwara na ihe odide akụkọ ihe mere eme). N'adịghị ka nchọpụta / uru bara uru, bụ nke kachasị mma, nzọụkwụ nke abụọ bụ nke ọma ma nwee ike ịba ụba site n'aka ndị na-enweghị ihe ọfụma a kapịrị ọnụ. N'eziokwu, ebe ọ bụ na ndị si mba ọzọ na-ahụkarị ihe dị iche iche site na ndị na-emechi ahụ ike, IRBs dị na United States chọrọ ka ha tinye ma ọ dịkarịa ala otu onye na-enweghị nyocha. Na ahụmahụ m na-eje ozi na IRB, ndị a dịpụrụ adịpụ nwere ike inye aka maka igbochi otu-eche. Ya mere, ọ bụrụ na ịnwe nsogbu ị na-ekpebi ma ọrụ nyocha gị ọ ga-emepụta ihe ize ndụ / uru bara uru ọ bụghị nanị ịjụ ndị ọrụ gị, gbalịa ịjụ ụfọdụ ndị na-adịghị ahụchite anya gị; azịza ha nwere ike iju gị anya.
Itinye ụkpụrụ nke Mmasị n'ọrụ na ihe atụ atọ anyị na-atụle na-atụ aro ụfọdụ mgbanwe ndị nwere ike imeziwanye ihe ize ndụ / uru ha bara uru. Dịka ọmụmaatụ, na Contagion Emotional, ndị na-eme nchọpụta gaara anwa anwale iji nyochaa ndị dị n'okpuru afọ 18 na ndị mmadụ nwere ike ịme ihe ọjọọ na ọgwụgwọ ahụ. Ha nwekwara ike gbalịa ibelata ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ site na iji ụzọ ndekọ ọnụ ọgụgụ dị mma (dịka akọwara ya n'ụzọ zuru ezu na isi 4). Ọzọkwa, ha nwere ike ịnwa ịnyocha nyochaa ndị otu na-enye aka nye onye ọ bụla nke gosipụtara na e merụrụ ahụ. Na Nri, Ties, na Time, ndị na-eme nchọpụta nwere ike itinye nchekwa ndị ọzọ mgbe ha wepụtara data ahụ (ọ bụ ezie na Harvard si IRB kwadoro usoro ha, nke na-egosi na ha kwekọrọ na omume nkịtị n'oge ahụ); M ga-enye ụfọdụ aro dị iche iche gbasara ntọhapụ data mgbe emesịrị m mgbe m kọwaa ihe ize ndụ gbasara ozi (ngalaba 6.6.2). N'ikpeazụ, na Encore, ndị na-eme nchọpụta ahụ gaara anwa ime ka ọnụ ọgụgụ ndị dị ize ndụ rịọrọ iji nweta ihe mgbaru ọsọ nke ọrụ ahụ, ha nwere ike ịhapụ ndị na-etinye ọnụ n'ihe ize ndụ site n'aka ndị ọchịchị nchịkwa. Nke ọ bụla n'ime mgbanwe ndị a ga-eme ka ịzụ ahịa gaa n'ime atụmatụ nke ọrụ ndị a, ihe mgbaru ọsọ m abụghị iji gosi na ndị a na-eme nchọpụta kwesịrị ime mgbanwe ndị a. Kama nke ahụ, ọ bụ igosi ụdị mgbanwe ndị ụkpụrụ nke Beneficence nwere ike ikwu.
N'ikpeazụ, ọ bụ ezie na afọ ole na ole na-emekarị ka ihe ize ndụ na uru dịkwuo mgbagwoju anya, o meela ka ọ dịkwuo mfe maka ndị na-eme nchọpụta ịbawanye uru nke ọrụ ha. Karịsịa, ngwá ọrụ nke afọ dijitalụ na-enye aka n'ịmeghe ma na-emegharị nchọpụta, ebe ndị na-eme nchọpụta na-eme ka ndị nchọpụta ndị ọzọ nyocha na koodu ha na-eme ma mee ka ha nweta akwụkwọ ha site na ịmepụta akwụkwọ. Ngbanwe a na-emeghe ma na-emegharị nchọpụta, ọ bụ ezie na ọ dịghị mfe, na-enye ụzọ maka ndị nchọpụta iji mụbaa uru nke nyocha ha n'emeghị ka ndị na-eme ya banye n'ihe ize ndụ ọ bụla (njirịta data bụ ihe ọzọ nke a ga-atụle n'ụzọ zuru ezu na ngalaba 6.6.2 na ihe gbasara nsogbu).